पूर्वको ‘भक्का’ काठमाडौंमा
Tuesday, January 28, 2020 | मंगलबार, माघ १४, २०७६
भित्तामा मादल, नाङ्लो र डोको झुन्डाइएको छ । कोठा बाँस र निगालोका चोयाले सजावट गरिएको छ । कोठाको एक कुनामा गाउँको मौलिक चुल्होको झझल्को आउने गरी बनाइएको अँगेनु । सिसाको ढोकामा ग्राहकले कागजको टुक्रामा लेखेर छोडेको प्रतिक्रियाको चाङ छ । यो दृश्य हो, काठमाडौं पुरानो बानेश्वरस्थितस्थित ‘भक्का हाउस’को ।
यहाँ देशको पूर्वभागमा लोकप्रिय भक्का खान पाइन्छ । जसका लागि दैनिक सयौं भक्काप्रेमी ‘भक्का हाउस’ पुग्छन् । पछिल्लो समय काठमाडौंमा भक्काको लोकप्रियता बढ्दो छ ।
के हो भक्का ?
सजिलोसँग बुझ्नका लागि भक्का भनेको बफ्याइएको चामलको पिठोको परिकार हो । यो एकदम स्वादिष्ट हुन्छ ।
झापाका राजवंशी समुदायले छोरीको बिहेमा कोसेलीस्वरुप मिठाई पठाउने प्रचलन छ । त्यसमा भक्काको परिकार पनि पठाउने गरिएको छ । पूर्वमा व्यावसायिक रूपमा भक्का पसल सञ्चालन गरिन्थ्यो । तर, अहिले काठमाडौंमा समेत भक्का विस्तार भएको छ ।
भक्का हाउसका सञ्चालक हुन् विवश काफ्ले । झापाका काफ्ले अमेरिकी दूतावासको प्रोजेक्टमा काम गर्थे । महिनाको ५० हजार तलब खान्थे । तर, उनी सन्तुष्ट थिएनन् । आफैं केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच्थे ।
त्यसैले नयाँ काम के गर्ने ? भन्ने रिसर्चमा थिए । सुरुमा खिरको परिकार राख्ने सोच बनाए । तर, उनका मामाले भक्का पसल राख्न सुझाए । उनलाई पनि भक्काले तान्यो ।
अनि भक्काबारे बुझ्न र पकाउने तरिका सिक्न झापा हान्निए । एक हप्ता उनले राजवंशी समुदायमा बसेर भक्का बनाउन सिके ।
त्यसपछि काठमाडौं फर्किए । उनी होस्टेलमा बस्थे । केही समय होस्टेलमा खाजाका लागि भक्का पकाउन थाले । राम्रोसँग पकाउन सक्ने भएपछि दुई वर्षअघि पुरानो बानेश्वरमा भक्का हाउस खोले ।
परिवारमा सबै सरकारी जागिरे । तर, उनले भक्का र चिया पसल खोलेकोमा परिवार आश्चर्यमा परेका थिए । जब भक्काले बजार ततायो । त्यसपछि परिवार पनि खुशी भए ।
काफ्लेले ६ लाख रुपैयाँ लगानीमा भक्का हाउस खोलेका हुन् । ‘गर्मीमा कम र जाडो समयमा भक्का धेरै विक्री हुन्छ,’ भक्का सञ्चालक काफ्ले भन्छन्, ‘जाडो समयमा दिनको १५ देखि २० हजारसम्मको व्यापार हुन्छ ।’
पुरानो बानेश्वर आसपासमा पूर्वका मानिस धेरै बस्ने भएकाले उनले त्यही ठाउँमा भक्का खोलेका हुन् । पूर्वबाट प्लनेमा काठमाडौंमा भक्का ल्याउने गरिएको रहेछ । अहिले भक्का हाउसले सजिलो बनाएको छ । भक्का खानेको भीड लाग्छ । प्लेन भक्काको मूल्य ४० रुपैयाँ छ । भक्का बनाउन चामल पूर्वबाटै ल्याउने गरिएको उनले बताए ।
‘काम सानो ठूलो हुँदैन । जोखिम लिएर सुरु गरेको । बिहान ५ देखि रातिको १२ बजेसम्म काम गर्छु । पकाउनेदेखि भाँडा माझ्नसम्म पछि पर्दिनँ । विदेश गएको भन्दा राम्रो कमाएको छु,’ संचालक विवश भन्छन् ।
अहिले उनले मैतिदेवीमा मटिया हाउससमेत खोलेका छन् ।
भक्का पकाउने तरिका
–चामलको मसिनो पिठो बनाउने
–हातले माड्ने अनि चाल्ने
– कसौंडीमा स्टिम गरेर पकाउने
–कसौडीमाथि राखेर पिठोलाई बफ्याउने
–एक मिनेटमै पाक्छ ।
प्रस्तुतिः दिनेश गाैतम
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ११, २०७६, ०७:३३:००
दालचिनी एक फाइदा अनेक
थ्याङ्क्स आमा !
कसुरी मेथीकाे फाइदै फाइदा
भक्तपुरमा ट्राफिक भवन उद्घाटन
राष्ट्रियसभामा तीन विधेयक पेस
प्रहरीले अधिकार दुरुपयोग गर्‍यो : सांसद ओली
प्रदेश १ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियान सुरु
सुप्रिम कोर्टमा सुनुवाइ सुरु, आफूले दुष्कर्म नगरेको मुकेशको दाबी
तालिवानको आक्रमणमा ९ प्रहरी मारिए
अग्निको शपथ र मुस्कुराउन नसकेकाे प्रधानमन्त्री मुहार